कर्मचारीलाई कोरोनाको डर, सेवाग्राहीलाई सेवाको आश - नेपालबहस
| १६:१०:२७ मा प्रकाशित
२८ असोज, भजनी । लम्कीचुहा नगरपालिकाका हीरासिंह बोहरा मालपोत कार्यालय टीकापुर धाउन थालेको दुई हप्ता पूरा भयो । मालपोत कार्यालयमा सेवा पाउँछु भन्ने आशा बोहरामा भए पनि मंगलबार मालपोत कार्यालयले वितरण गर्ने कुपन नपाउँदा उनी निराश थिए ।
बिहान ४ बजे मालपोत कार्यालय टीकापुर पुगेका हीरासिंह भन्दा पहिले नै धेरै सेवाग्राही लाइनमा भएका कारण मालपोत कार्यालयले दैनिक वितरण गर्ने ६० वटा कुपनमा उनी अटाउन सकेनन । तैपनि कुनै विकल्प भइहाल्ने कि ? भन्ने आशामा उनी दिनभर मालपोत कार्यालय परिसरमै रहे । तर, काम भएन ।
“मालपोतले कुपन वितरण गर्छ । तर, केही कुपन कर्मचारीले नै भित्रै मिलाउदा रहेछन्”, हीरासिंहले भने, “हामी सर्वसाधारणका लागि धेरै ठूलो सास्ती छ । न त कसैसँग पहुँच छ न त हाम्रो कुरा कसैले सुन्छ ।” उनले जग्गा रोक्काका लागि दुई हप्तादेखि मालपोत कार्यालय आउँदा मात्रै ठूलो खर्च भइसकेको बताउँदै कर्मचारीकै कारण कोरोना भाइरसको त्रास भयावह बन्दै गएको बताए ।
त्यस्तै, भजनी नगरपालिका–६ बसाहाका फरहारी डङ्गौरा पनि जग्गा रोक्काका लागि मालपोत धाउन थालेको हप्ता दिन पुगेको बताए । “मालपोतले हप्तैपिच्छे नियम बनाउँदा हामी सेवाग्राहीले ठूलो सास्ती भोग्नु परेको छ”, उनले भने, “नियम बदलिन्छ थाहै हुँदैन । आफूलाई जस्तो सहज भयो, त्यस्तै नियम बनाउँदा कोरोनाबाट कर्मचारी त सुरक्षित रहलान् । तर, सेवाग्राहीको जिम्मेवारी कसले लिने ?”
मालपोत कार्यालय टीकापुरले असोज १ गतेबाट हालसम्म तीन पटक नियम बदलिसकेको छ । मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको अत्याधिक भीडभाड हुन थालेपछि असोज ४ गते आइतबारबाट एक स्थानीय तहका लागि एक बार मात्र सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त नियम दुई दिन पनि टिक्न सकेन । त्यसपपछि दैनिक ४० जना सेवाग्राहीको काम मात्र हुने गरी कुपन प्रणाली लागू ग¥यो । त्यो नियम पनि दोस्रो दिन कार्यान्वयन हुन सकेन ।
पुनः मालपोत कार्यालयले साविकका गाविस अनुसार बार छुट्याएर सेवाप्रवाह गर्न शुरु ग¥यो । त्यसमा पनि अत्याधिक भीडभाड हुन थालेपछि मालपोत कार्यालयले साविकका गाविसलाई बार अनुसार दैनिक ६० वटा कुपन वितरण गरी सेवा प्रवाहको काम शुरु गरेको छ । अहिले दैनिक ६० वटा कुपन वितरण हुँदा सेवाग्राही राति ३ बजेदेखि नै कुपनका लागि लाइनमा बस्ने गरेका छन् ।
मालपोतले १० बजेपछि मात्र कुपन वितरण गर्ने भने पनि सेवाग्राहीले बिहान ३ बजेदेखि नै लाइनमा बस्दै आएका नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएशन इकाई समिति टीकापुरका अध्यक्ष सत्यराज शर्माले बताए । उनले बन्दाबन्दीका कारण हजारौं सेवाग्राहीको काम रोकिएको बताउँदै सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर आएका सेवाग्राहीका काम कर्मचारीले गर्न सके भीडभाड कम हुने बताए ।
“रोक्का, फुकुवाका लागि किन कुपन वितरण गर्नुप¥यो ? कुपन प्रणालीले झनै जोखिम निम्त्याएको छ”, अध्यक्ष शर्माले भने, “यदि कुपनै वितरण गर्नुपर्ने भए पनि सेवाग्राहीलाई अघिल्लो दिन नै कुपन वितरण गर्दा भीडभाड कम हुनसक्छ ।”
मालपोत कार्यालय टीकापुरका प्रमुख दलबहादुर चन्दले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि हप्तैपिच्छे नियम परिवर्तन गर्नुपरेको बताए । उनले जुन प्रक्रिया अपनाउँदा पनि भीडभाड कम गर्न नसकिएको बताउँदै मालपोत कार्यालय कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको बताए । “हामीले रहरभन्दा पनि बाध्यताले विकल्प खोज्दै आएका हौं”, उनले भने, “अझै पनि सेवाग्राहीको भीडलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौँं । त्यसमा पनि प्रतिलिपि र निवेदनमा हामीले कुपन प्रणाली लागू गरेका छैनौं ।”
यस वर्ष कोरोनाले ‘कहीँ नभएको हाँडीगाउँको जात्रा’ स्थगित १७ मिनेट पहिले
आज थप २५०८ कोरोना संक्रमण, १७ जना संक्रमितको मृत्यु ३३ मिनेट पहिले
यस वर्षको तिहारमा छिमेकी मुलुक भारतबाट फूल आयात नहुने १ घण्टा पहिले
घुइँयाघाटबाट लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ ९ मिनेट पहिले
दुई लाख नगदसहित २९ जना जुवाडे पक्राउ १२ मिनेट पहिले
ओली र प्रचण्डबीच १२ दिनपछि भेटघाट, संवादहीनताको अन्त्य ५५ मिनेट पहिले
संगीतकार रुद्र श्रेष्ठको सुमधुर संगीतमा नयाँ गीत काबेली खोला ३ घण्टा पहिले
देहरादूनमा विद्यार्थीमाथि भएको घटनाप्रति सरकार गम्भीर छ ! २० घण्टा पहिले
काेराेना कहरमा दशैँ आयो र गयो तर सरकार भ्रष्टाचारमै मस्त रह्याे : नेता केसी ८ घण्टा पहिले
रात्रिकालीन खेल हेर्ने विराटनगरवासीको चाहना पूरा हुँदै १९ घण्टा पहिले
मौरीपालन कृषक मौरीको हेरचाह गर्दै ३ दिन पहिले
विधिपूर्वक गरियो सिद्धिदात्रीको पूजाराधना ६ दिन पहिले
चार जिल्लाका सडक मर्मत सम्भार तथा विस्तार कार्य तीव्ररूपमा अघि १ दिन पहिले
पाँचथरमा आयुर्वेदिक सेवामा आकर्षण ३ दिन पहिले
कमल र मेलिनाको माया गाँठो पर्लामा रविन र एन्जिला २ हप्ता पहिले
विवाह गर्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि हत्या, प्रेमी शैफुल खान पक्राउ ३ हप्ता पहिले
चितवनमा १९ दिनकी सुत्केरी संक्रमित महिलाकाे मृत्यु ४ दिन पहिले
राष्ट्रपतिको हातबाट प्रधानमन्त्री दम्पत्तीले लगाए दशैँको टीका र जमरा ५ दिन पहिले
राहत लैजाँदै मजदूर बालबालिका २ हप्ता पहिले
पूर्व उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र मेखलाल श्रेष्ठको पहलमा भीरकोट नगरपालिकालाइ पिपिई र माक्स प्रदान ६ महिना पहिले
अफगानिस्तानमा बम विस्फोट गरी पाँच सैनिकको हत्या २ महिना पहिले
कोभिड–१९ का कारण विदेशमा १४ नेपालीको मृत्यु ७ महिना पहिले
कार्यविभाजन र मन्त्रीमण्डल हेरफेरका विषयमा ओली प्रचण्डबीच छलफल १ वर्ष पहिले